Ulutshintsha njani uyilo olutsha lwebhari yokukhangela yeSafari kwi-iOS 15 | IPhone iindaba
Ulutshintsha njani uhlengahlengiso lwebha yokuhambisa inqanawa kwi-iOS 15
Ingelosi Gonzalez | | iOS 15
IOS 15 iya kuthi ifike kwiiveki zokugqibela zikaSeptemba okanye ngeye-Okthobha yokuqala. Le nguqulo intsha ibikunye nathi ukusukela ngoJuni ineembono ezibonisa umahluko kolunye lotshintsho lwayo kwinqanaba lokuqonda. Omnye wabo uwa phezu uyilo lwe-safari que ujonge ezantsi ngokubhekisele kwinto esaziyo de kwaba li-iOS 14. Nangona kunjalo, uyilo lokuqala lwee-betas zokuqala ze-iOS 15 khange zibambe kubaphuhlisi. Yiyo loo nto kwagqitywa ngayo shiya ezandleni zabasebenzisi uyilo lwebar yokukhangela abayifunayo. Sikufundisa indlela yokutshintsha phakathi koyilo olutsha noludala.
Ibha yesithuba esitsha icwecwe kwaye ayisindi, kwaye iyadada ifike ezantsi kwesikrini, ukuze abasebenzisi bakwazi ukuswayipha ngokulula phakathi kweethebhu.
1 Buyela kwibar yokukhangela kwi-iOS 14 ngokulandela la manyathelo kwi-iOS 15
2 Utshintsho luza nakwi-iPad, kodwa ngendlela ecekeceke
Buyela kwibar yokukhangela kwi-iOS 14 ngokulandela la manyathelo kwi-iOS 15
Ukuzikhusela kweApple kuyilo lwayo olutsha lweSafari kuxhomekeke uyilo olumbeneyo, olunemisebenzi eyahlukeneyo ekuvumela ukuba ungene kwi-Intanethi ngokusebenzisa izijekulo ezininzi zokuchukumisa, ukunqanda ukulandelelana kokuchukumisa kwiscreen esichitha ixesha lomsebenzisi. Nangona kunjalo, ukutsiba phakathi kweziyilo zimbini kunokuba yinto ephazamisayo. Ngesizathu esinye, I-Apple ivunyelwe kwi-beta 6 ye-iOS 15 Abasebenzisi baya kutshintsha phakathi koyilo kunye nolunye. Nangona kusenokwenzeka ukuba kwiinguqulelo ezinkulu ezizayo ezinje nge-iOS 16 utshintsho luya kuba lolokugqibela kwaye uyilo alunakukhethwa.
Ukutshintsha uyilo lwe-bar yokukhangela kwi-iOS 15, landela la manyathelo:
Fikelela kuseto lwe-iOS
Ngenisa ukhetho lwe-Safari
Fumana icandelo le 'Tabs'
Khetha phakathi kweemodeli ezimbini ezikhoyo: ibar yesithuba o ithebhu enye
Ibha yesithuba ibar engapheliyo evumela ukuhamba phakathi kweethebhu ngokuswayipha uye ngasekunene okanye ekhohlo. Endaweni yoko, uyilo lwethebhu enye lufuna ukubonwa okungaphezulu kumsebenzisi ukufikelela kuzo zonke iiwindows ezivulekileyo. Ukwenza olu tshintsho lube lula, ungacofa kwi-'AA 'icon kwi-Safari yokukhangela ibha kwaye ucofe ukhetho 'bonisa ibar ngasentla okanye ezantsi' kuxhomekeke kuyilo onalo ngokwendalo.
I-Safari kwi-iOS 15, ezi ziindaba zayo kwi-iPhone nakwi-iPad
Ibha yethebhu eyilwe ngokutsha ithatha indawo encinci kwaye ithatha umbala wewebhu oyindwendwelayo, ke amaphepha alulekele emacaleni efestile.
Utshintsho luza nakwi-iPad, kodwa ngendlela ecekeceke
Nangona utshintsho lomxholo weethebhu alufikeleli I-iPadOS 15 ewe olo lwenza utshintsho kuyilo lwebar yokuhambisa. Ukuba senza amanyathelo afanayo nakwimo ye-iOS 15, sinokutshintsha uyilo phakathi kweendlela ezimbini:
Yahlulahlula i-bar ye-tab: apho sine-bar ephambili yokukhangela kunye ne-bar ye-tab emazantsi
Ibha ye-tab ehambelanayo: apho ibha yokukhangela idityaniswe kwithebhu esivulekileyo kuyo
Umahluko unokubonwa kumfanekiso ophambili kweli candelo. Kujongwa njenge ibha yesithuba eyahlukileyo ithatha indawo engaphezulu kwescreen kunaleyo icompact, Nangona besitshilo, umxholo weethebhu kunye nokudlula kwethebhu ngokusebenzisa izijekulo ezininzi zokuchukumisa akufikanga kwi-iPadOS 15 ngokungathi iyenzile kwi-iOS 15.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » Ulutshintsha njani uhlengahlengiso lwebha yokuhambisa inqanawa kwi-iOS 15